Yellowstone ugwu mgbawa: e ji mara, geology na eruptions | Network Meteorology
Yellowstone ugwu mgbawa
Otu n’ime ugwu ugwu a kacha mara amara n’ụwa bụ ugwu okwute na-agbọpụta ọkụ. Ọ dị na Yellowstone National Park dị na United States ma dị n'akụkụ akuku ugwu ọdịda anyanwụ nke Wyoming. Ọ bụ ugwu mgbawa nke nwere nkwanye ugwu atọ n'ime nde afọ abụọ gara aga na nke mebere caldera nke jikọrọ ihe dịka 2.1 × 55 72 kilomita.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara njirimara, jioloji na ntiwapụ nke ugwu ọkụ Yellowstone.
2 Yellowstone ugwu mgbawa
3 Yellowstone mgbawa ugwu mgbawa
4 Ala ọma jijiji metụtara
Enwere otutu ụkpụrụ maka mmalite nke ebe a na-ekpo ọkụ Yellowstone. Fọdụ ndị ọkà mmụta banyere ala na-ekwu na ọ malitere site na mmekọrịta nke ọnọdụ obodo na lithosphere na convection na uwe elu. Ndị ọzọ na-egosi na ọ sitere na uwe mwụda miri emi (akwa mantle). Esemokwu a ruru ka ọdịdị ebe ọkụ dị na ndekọ ala. Ọzọkwa, mmiri basalt Colombia na-apụta n'otu oge ahụ, na-akpali ịkọ nkọ banyere mmalite ya.
Ndagwurugwu ahụ dị n’ebe dị ọkụ. Ebe a na-ekpo ọkụ Yellowstone dị n’okpuru Yellowstone. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ gafere ala ahụ site na ọwụwa anyanwụ ruo n’ọwụwa anyanwụ, ebe hotspot dịkarịsịrị omimi karịa mbara ala ahụ ma na-adịgide adịgide.
N'ime afọ 18 gara aga, ebe obibi Yellowstone emepụtawo ihe ike na-aga n'ihu na idei mmiri nke basalt. Ma ọ dịkarịa ala, 12 n'ime ndị na-agbawa buru ibu buru ibu nke na e weere ha dị ka nnukwu-eruptions. Mgbe ụfọdụ, ihe ndị ahụ na-agbapụta magma ndị ahụ e chekwara ngwa ngwa nke na ala ahụ gabigara ókè dakwasịrị ghọọ ime ụlọ magma na-ama jijiji, na-eme ihe a na-akpọ ugwu mgbawa. Ọnọdụ ala nke ọnụ. Gba ugwu mgbawa nke ihe mgbawa mepụtara nwere ike ibu buru ibu ma dịkwa omimi dị ka ọdọ mmiri buru ibu na ọkara, ha nwekwara ike ime ka nnukwu ugwu pụọ.
Trackszọ egwu kacha ochie na ndagwurugwu ahụ n'akụkụ abụọ nke oke Nevada-Oregon n'akụkụ McDermit. Otu n'ime cater, Bruno-Jabici Crater na ndịda Idaho, kpụrụ 10-12 nde afọ gara aga, na nguzobe ya hapụrụ okpukpu ntụ nke dị omimi 30 cm na northheast nke Nebraska.
N'ime afọ iri na asaa gara aga, ugwu mgbawa Yellowstone emepụtala ugwu 17 ma ọ bụ karịa. Ogige Ntụrụndụ Yellowstone na-anọ na nnukwu ugwu mgbawa anọ (US NPS).
A na-akpọ ugwu mgbawa nke na-ewepụta nnukwu ugwu dị egwu dị egwu. N'ihi ya kọwaa, na Yellowstone supervolcano ọ bụ ugwu mgbawa ugwu mepụtara ikpeazụ atọ supereruptions nke Yellowstone hotspot. O mepụtara obere mgbawa nke mebere West Thumb Lake 174.000 afọ gara aga.
Mmiri na-adịbeghị anya mere ihe dịka 70.000 afọ gara aga na mgbawa ike mere na West Thumb Lake ọdịda anyanwụ nke Yellowstone ihe dị ka afọ 150.000 gara aga. Enwekwara mgbawa uzuoku. Afọ 13.800 gara aga, mgbawa uzuoku mebere oghere 5 kilomita na dayameta na Mary Bay na nsọtụ Yellowstone Lake n'etiti oghere ahụ.
Taa, ọrụ mgbawa na-apụta site n'ọtụtụ ikuku ikuku na-agbasasị na mpaghara ahụ, gụnyere amaala Old Faithful geyser, yana usoro mgbasa ala nke na-egosi mmụba na-aga n'ihu nke ime ụlọ magma. N'ihi mgbawa ugwu ndị na-agbọpụ ọkụ na ọrụ ikuku na-aga n'ihu, nnukwu ihe mgbochi magma dị n'okpuru ndagwurugwu ahụ.
Ihe magma dị n'ime ime ụlọ a nwere naanị gas na naanị nwere ike ịnọ na-agbaze n'okpuru nnukwu nrụgide nke magma. Ọ bụrụ na ewepụtara nrụgide ahụ ruo n’ókè ụfọdụ n’ihi mgbanwe mgbanwe ala ụfọdụ, akụkụ nke gas na-agbaze agbaze na-etolite, na-eme ka magma gbasaa. Ọ bụrụ na mgbasa a na-ewepụta nrụpụta dị ukwuu karị, ọ nwere ike ibute mmeghachi omume a na-achịkwaghị achịkwa ma nwee ike ibute mgbawa gas na-eme ihe ike.
Yellowstone mgbawa ugwu mgbawa
N'agbata 2004 na 2008, enweela ịrị elu nke oghere Yellowstone site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7,6 cm kwa afọ, ihe karịrị okpukpu atọ karịa ihe a hụrụ kemgbe ihe ndị a malitere na 1923. Ndị ọkà mmụta sayensị si US Geological Survey US, Mahadum Utah, National Park Service na Yellowstone Volcano Observatory kwuru, sị: “anyị ahụghị ihe akaebe ọ bụla na mgbawa egwu ọzọ ga-eme na Yellowstone n'ọdịnihu dị nso. Nlọghachi nke oge nke ihe ndị a abụghị nke oge niile ma ọ bụ nke a na-ebu amụma ”
Dị ka otu nnyocha nke National Geographic Society si kwuo, Yellowstone na-esote isi osusu yiri ka ọ ga-eme na otu n'ime atọ yiri nsogbu zones na-agba ọsọ n'ebe ugwu / northwest site na ogige ahụ. Abụọ n'ime ebe ndị a mepụtara nnukwu mmiri na-asọpụta n'oge ọrụ ikpeazụ nke supervolcano, afọ 174.000-70.000 gara aga, na mpaghara nke atọ bụ mpaghara nwere oke ịma jijiji na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ala ọma jijiji metụtara
N'ihi ugwu mgbawa na tectonic nke mpaghara ahụ, oghere Yellowstone na-enwe ahụmịhe 1,000 ruo 2,000 kwa afọ. Mgbe ụfọdụ, a na-edekọ ọtụtụ ọnụ ọmajijiji n’oge dị mkpirikpi.
N'ime ọmụmụ ihe ha, ndị nyocha ahụ ji netwọkụ seismograph nke dị gburugburu ogige ahụ wee depụta ime ụlọ magma. Ebili mmiri na-eme nwayọ nwayọ mgbe ha na-agabiga ihe na-ekpo ọkụ, nke gbazere agbaze, yabụ ị nwere ike ịlele ihe n'okpuru. Dika otu ndi sayensi kwuru, nnukwu oghere a bu nnukwu: o di n'etiti kilomita 2 na 15 kilomita, ihe dika 90 kilomita n'ogologo na 30 kilomita n'obosara.
Ọ gbatịpụrụ ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ogige ahụ karịa ka ọmụmụ ndị ọzọ gosipụtara ma nwee ngwakọta nke ihe siri ike na lava. N'ihe omuma anyị, eserese maapụ nha a. Site na nchọta ndị a, ndị na - eme nchọpụta nwere ike nyochaa egwu nke ndị dike na-ejighị n'aka. Yellowstone isi iyi nke okpomọkụ dị n’agbata kilomita 405 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 2.900 n’okpuru ala. O nwere ike si na mmiri mmiri ya. Ndị ọkà mmụta sayensị amaraworị na ime ụlọ magma dị n'elu ọdọ mmiri ma na-adọta magma na ya. Achọtara ya dị kilomita 5 ruo 14 n'okpuru elu ma bụrụ mmanụ ọkụ maka gysers, ọdọ mmiri na ihe ndị ọzọ na-ewu ewu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ugwu ọkụ Yellowstone na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Yellowstone ugwu mgbawa